I-Belize ivumela abahambi abagonyiweyo ukuba bangene ngaphandle kovavanyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseBelize » I-Belize ivumela abahambi abagonyiweyo ukuba bangene ngaphandle kovavanyo
Iindaba zaseBelize • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuba abagibeli bayasilela ukubonisa uvavanyo olubi lwe-PCR okanye uvavanyo lwe-antigen, enye iya kwenziwa kwisikhululo seenqwelomoya ngeendleko zomhambi ze-US $ 50
Abahambi abagonyelweyo ngoku banokungena eBelize ngaphandle kokunikezela ngovavanyo olubi lwe-COVID-19
Abahambi mababonise iKhadi leRekhodi yokuGonya ye-COVID-19 njengobungqina bokuba iyeza belinikwe ubuncinci iiveki ezimbini ngaphambi kokufika
Abahambi abangagonywanga kusafuneka banikezele ngovavanyo olubi lwe-COVID-19 PCR oluthathwe ngaphakathi kweeyure ezingama-96 zokuhamba okanye uvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antigen oluthathwe kwiiyure ezingama-48 zokuya eBelize
IBelize ngoku ivumela abahambi abagonyiweyo ukuba bangene kule County ngaphandle kokuveza uvavanyo lwe-COVID-19 olubi. Umyalelo omtsha wezempilo, owaqala ukusebenza ekupheleni kukaFebruwari, uthi abahambi abangena eBelize kwisikhululo seenqwelomoya kwaye babonelele ubungqina bokugonywa kwe-COVID-19 akusafuneki ukuba babonise iziphumo ezingalunganga zokungena. Abahambi abagonyelweyo banokungena kweli lizwe ngaphandle kweemfuno zovavanyo ukuba baveza iKhadi leRekhodi yokuGonya ye-COVID-19 njengobungqina bokuba iyeza belinikwe ubuncinci iiveki ezimbini phambi kokufika.
Abahambi abangagonywanga kusafuneka banikezele ngovavanyo olubi lwe-COVID-19 PCR oluthathwe ngaphakathi kweeyure ezingama-96 zokuhamba okanye uvavanyo lwe-Antigen olukhawulezileyo oluthathwe kwiiyure ezingama-48 zokuhamba ukuya Belize. Ukuba abakhweli bayasilela ukubonakalisa i-PCR engeyiyo okanye uvavanyo lwe-antigen, enye iya kwenziwa kwisikhululo seenqwelomoya ngeendleko zomhambi ze-US $ 50. Ukongeza, iSebe lezeMpilo kunye neMpilo-ntle yaseBelize landise ukuvavanywa ukulungiselela bonke abantu abasuka eBelize ukuba baye e-US nakwamanye amazwe afuna iziphumo zovavanyo ezingalunganga zokungena.
Isigqibo sokuphungula isithintelo kubahambi abafumene isitofu sokugonya se-COVID senziwe ngokuncitshiswa kwamatyala amatsha kwilizwe liphela. IBelize iphumelele kakhulu kwiinzame zayo zokulawula ukuhanjiswa kwe-COVID-19 kwezi veki zimbalwa zidlulileyo; Okwangoku, zingaphantsi kwe-100 iimeko ezisebenzayo kwilizwe liphela kwaye amanani aye ehla ngokungaguquguqukiyo.
Njengoko iphulo lokugonya i-COVID-19 laseBelize liqhubeka kwilizwe liphela, abachaphazelekayo kwezokhenketho abaphambili baya kuba phakathi kwabo bafumana i-AstraZeneca Vaccine ngexesha lokuqala kwephulo. Ukugonywa kwecandelo lezokhenketho, ngokubambisana nokuphunyezwa okuqhubekekayo kwenkqubo yezempilo nokhuseleko, kunye nokufunyanwa kwe-World Travel & Tourism Council (WTTC) Isitampu sohambo olukhuselekileyo luya kudlulisela kwihlabathi ukuba iBelize ngokwenene lukhenketho olukhuselekileyo nolusebenzayo indawo ekuyiwa kuyo.
Abakhenkethi base-US nabase-EU abagonywe ngokupheleleyo baya kuba lulutho ku ...
Ukuhlaziywa kweTurks kunye neCaicos Islands I-TCI yokuQinisekiswa okuQinisekisiweyo ...
IHungary ivumela ukungeniswa kwiRashiya egonywe ngokupheleleyo ...
Ukuqhuma kwesibini kuxelwe kwisikhululo seenqwelomoya iKabul emva kwe13 ...
Uneminyaka eli-18 ubudala ukuba asebenze njengeNxusa lasePort Canaveral elitsha
Irizothi kaJean-Michel Cousteau, eFiji ngoku iyamkela ...
Ugonywe inqwelomoya kuphela ye-KLM: Amsterdam-Singapore
Abaveleli bajongene nezithintelo zokuhamba ezintsha eHawaii
Imigca yomoya yeDelta: Bonke abasebenzi abangagunyaziswanga baya kuba ...
Izinto ozithandayo zibandakanya iNiagara Falls, Grand Canyon, Sahara ...